WatchOS 6.1.1 uye tvOS 13.3 Developer Betas | Ndinobva mac
WatchOS 6.1.1 uye tvOS 13.3 mushambadzi webasa
Idzo nyowani beta vhezheni dzevagadziri dzakatangwa nezuro masikati uye mavari takawana kuvandudzwa kwakawanda asi ese iwo yakanangana nekugadzikana, kuchengetedzeka uye kuvimbika kweOS kubva kuApple. Chokwadi ndechekuti idzi beta shanduro dzinouya panguva inonakidza uye ndezvekuti akasiyana masystem anoda kugadzikana kwekusimudzira.
Kune vazhinji vashandisi vakamirira kuti mavhezheni matsva agadzirise bhatiri kana kunyange sisitimu kudzikama nyayaMune ino kesi, zvinoita sekunge Apple iri kutarisa zvese kuyedza kugadzirisa izvi zvinhu. Vagadziri vanotova nemaoko avo mavhezheni matsva e beta nemhando idzi dzekuvandudza.
Maawa mashoma apfuura uye isu hatizive parizvino kuti pane shanduko dzakanyanya mavari, asi kana paine chakakurumbira chikaonekwa isu tichagadzirisa ino imwechete nyaya kana kunyora nyowani nenhau. Tinofanira kurangarira kuti mawatchOS vhezheni haatenderi kudzikisira kana yaiswa uye isu tinofanirwawo ita kuti iPhone iwedzere kuvandudzwa kune beta beta dzeIOS kuitira kuti ishande nemazvo saka zvirinani kuti ugare kunze kwemabheta aya.
Sezvatinogara tichitaura, zvakakosha kuti ugare kure neshanduro idzi dzevagadziri uye womirira kana zvirizvo, kubuda kweshanduro dzevazhinji beta (muWatchOS isingawanikwe) kunyangwe zvirinani kuva nemoyo murefu sezvo nhau dziri shoma. Chokwadi ndechekuti shanduro dzeApple beta kazhinji dzinogadzikana asi iwo mabheta uye anogona kunge aine kusapindirana nechishandiso kana chishandiso chatinoshandisa pabasa nekudaro tinofanira kungwarira nezvatinoisa pane edu mafaera. Zvirokwazvo nhasi beta vhezheni dzevagadziri veMacOS dzichaburitswa, isu tichava takateerera.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Apple zvigadzirwa » Apple TV » WatchOS 6.1.1 uye tvOS 13.3 mushambadzi webasa
Mujjo anotangisa akati wandei emhando yepamusoro kesi dze iPhone yako